52-sano guuradii kasoo wareegtay midawgii gobollada waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya oo laga xusay meelo ka mid ah Soomaaliya. – Radio Daljir
Luulyo 1, 2012 4:37 g 0
Moqdisho, July, 01- Waxaa meelo-badan oo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya laga xusay munaasabada 52-sano guuradii markii ay xornimada qaateen gobollada koonfureed ee Soomaaliya, ayna midoobeen waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya.
Xafladii ugu ballaarnayd ayaa xalay waxaa lagu qabtay magaalada Moqdisho, gaar ahaa aqalka Villa Soomaaliya, waxaana joob joog halkaasi ahaa madaxwaye Shariif Shiikh Axmed, xubno ka tirsan golaha wasiirada, xildhibaanno, waxgarad, culumaa’udiin, iyo qaybaha bulshada gobolka Bannaadir.
Munaasad taasi la mid ah waxaa lagu qabtay magaalada Garowe ee xarunta dawladda Puntland gaar ahaan aqalka madaxtooyada, waxaana goobta xaflada soo xaadiray M/kuxiggeenka ahna sii-hayaha madaxwaynaha Puntland General C/samad Cali Shire, wasiirro, xildhibaanno, shaqaalaha hay’adaha dawliga ah, mashaa’ikh, waxgarad, arday, kooxaha fanka iyo suugaanta iyo qaybaha bulshada ku dhaqan Puntland.
Inkastoo munaasabado lagu waynaynayo maalinta 1-da Luulyo lagu qabtay dhul-badan oo Soomaalidu dagto, kana mid ah aduunka, hase ahaatee dhawr-sano kaddib waxaa xalay xuska 1-da Luulyo lagu qabtay degmada Garbahaaray ee gobolka Geddo, oo horay ay gacanta ugu hayeen kooxda Al-shabaab, waxaana guddoomiyaha degmadaasi oo waraysi siiyay Radio Daljir uu sheegay in xaflada oo socota ay dagaal soo qaadeen kooxda Al-shabaab, balse ciidamada DFKS oo kaashanaya Ahlusuna Waljamiica ay iska caabiyeen.